Iyo itsva iPad Air ichave neM1 processor kubva kuPadad Pro | Nhau dze iPhone
Iyo itsva iPad Air ichava neM1 processor kubva kuPad ​​Pro
Isu tiri asingasviki maawa makumi maviri nemana kubva kuApple mharidzo chiitiko uye zvinoreva kuti makuhwa ari kuwanda. Wokupedzisira anotaura nezvake itsva iPad Air iyo ichaunzwa mune iyo Keynote, uye izvo zvinounza iyo M1 processor, yakafanana neiyo iPad Pro.
Chimwe chezvigadzirwa chinoita senge chokwadi chekuti mangwana tichakwanisa kuona chizvarwa chitsva chePad Air. Kusvika ikozvino runyerekupe rwaitaura nezve A15 processor, imwechete iyo yazvino ma iPhone modhi anayo, semoyo wehwendefa idzva, zvisinei nguva shoma yapfuura. 9to5Mac yakaburitsa nhau yekuti iyo itsva iPad Air ichabatanidza iyo M1 processor, iyo imwechete iyo yamasimbaose iPad Pro 2021 ina, kuwedzera kuMacBook Air uye itsva iMac 24″, Iyo komputa processor yechishandiso icho Apple yanga ichinongedza kwemakore sechinotsiva laptop, haina kushata. kufamba.
Zvisinei, chokwadi chakasiyana chaizvo, kubvira iyo iPad Pro 2021 iyo yanga iine processor yakafanana kwemwedzi yakawanda hairegi kuve neiyo chaiyo vhezheni yeiPadOS. kupfuura mamwe maApple iPads. Kureva kuti, iwe unogona kuita zvakafanana nePadad Pro 2021 ine M1 processor uye mutengo unotanga pa879 € senge iPad 2021 ine A13 processor uye iyo inodhura €379. Kuti zvive zvakanaka, kune misiyano yakawanda pakati pezvigadziri zviviri mukuwedzera kune processor inogona kururamisa mutsauko wemutengo, asi pamwero wekuita, izvo izvo processor ine, vashoma.
Apple inotsvagei nekufamba kwekushongedza iPad yayo neiyo processor yakafanana nemakomputa ayo? Tichafanira kumirira, asi panguva ino tavhiringika, uye kusvika kweM1 kune iPad Air kuvhiringidzika kunowedzera zvakanyanya. Kana iwe wanga uchiri kutarisira kuti iPad Pro imire yakaparadzana kubva kune yakasara yePadad renji ine iPadOS 16, iyi iPad Air ine M1 ibucket remvura inotonhora.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » iPad Air » Iyo itsva iPad Air ichava neM1 processor kubva kuPad ​​Pro
Iyo skrini ine mbiri gomba dhizaini yeiyo iPhone 14 Pro ichasvika muna 2023 kune ese maPhones